'कालिकगण्डकी डायभर्सन गर्दा नारायणीमा पानी जहाज आउँदैन'
scheduleशनिवार जेष्ठ २४ गते, २०७७
‘कालिकगण्डकी डायभर्सन गर्दा नारायणीमा पानी जहाज आउँदैन’
काठमाडौँ, २७ साउन । प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य सांसद खगराज अधिकारीले कालीगण्डकीको डायभर्सन गर्न नहुने बताएका छन् । उनले केलादीघाट र देवघाट जस्ता पवित्र घाटहरु पानी विनाका हुने भदै, चापाकोट रामपुर लगायतका टार सिंचाई हुनबाट बञ्चित हुने तथा नारायणीमा पानी जहाज संञ्चालन गर्ने विषय पनि प्रभावित हुने भन्दै विषयवस्तुको गार्भियर्ता तर्फ विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयबारे सदनलाई जानकारी गराउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै दैनिक जसो सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद गगन कुमार थापाले शुन्य र विशेष समयमा सदनमा उठेका विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रीले ५ दिन भित्र सदनमा उपस्थित भई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलि कार्यान्वयन गर्न सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । विगतमा शुन्य र विशेष समयमा उठेका विषय सम्बोधन भएन भनेर नियमावलिमा नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दे उनले “नियमको कार्यान्वयन किन नभएको रु” भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरे ।
त्यस्तै शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले अन्य समसायिक र क्षेत्रगत विषयमा सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद अमृता देवी अग्रहरिले कपिल वस्तुमा किसानले मलखाद र पानीको ठुलो अभाव झेल्नु परिरहेको भन्दै मलखाद र सिंचाईको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर ।
उनले यसबारे पटक पटक कुरा उठाउदै आएको भए पनि सरकारले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्दे कान थुनेर र आखा बन्द गरेर मुलुक चल्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधरण लगायत इच्छुक जनतालाई संघीय संसद भवन भित्र निर्वाध प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गणेश कुमार पहाडीले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्र्तगत सिन्धुलीको खुर्रकोट घुर्मी सडकखण्डमा दोहोरो यातायात संञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथि छलफल
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५६ पुग्यो
पर्वतका ४ जना संक्रमित आइसोलेसनमा भर्ना
गण्डकीमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या ५४ पुग्यो
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५४ पुग्यो
छुवाछूत समाजको विडम्वना हो: मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३८ पुग्यो
भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा रहेका पुरुषको मृत्य
गण्डकी प्रदेशमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या ३७ पुग्यो
क्वारेन्टाइनबाट फर्कनेले ओड्ने, ओछ्याउने र झुल घर लैजान थालेपछि …
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २७ पुग्यो
विदेशबाट फर्किएकाहरु यी ४७ होटेल क्वारेन्टिनमा आफ्नै खर्चमा बस्न सक्नेछन्
काठमाडौं, २४ जेठ । आफ्नै खर्चमा होटल क्वरेन्टिनमा बस्नेहरुको लागि ४७ वटा होटलको नाम सार्वजनिा भएको छ । चारतारेदेखि डिलक्स...
यो लेखको सुरुवात म एउटा प्रसङ्गबाट गर्न चाहन्छु । बाबुरामसँग नजिक रहेर काम गरेका एक शिक्षकले एक भेटमा भने, ‘मधेसीलाई धेरै...
आज रातीको चन्द्रग्रहण नेपालबाट देखिँदैन त्यसैले बार्नुपर्दैन: पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति
काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज राती लाग्ने चन्द्रग्रहण नेपालबाट नदेखिने जनाएको छ । जल, अन्तरिक्ष एवं...
कस्तो रहला शनिबारको माैसम ? यस्तो छ महाशाखाको पुर्वानुमान
काठमाडाैं, २४ जेठ । शनिबार दिनभर पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज निसर्ग आँधीका कारण...
साउदी राजकुमारको होटेल विनोद चौधरीले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा किने
काठमाडौं, २४ जेठ । साउदी अरबका राजकुमारको लक्जरी होटेल नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीले किनेका छन्। साउदी अरेबियाका राजकुमार...
२०२० को राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पभन्दा बिडेनको लोकप्रियता बढी
एजेन्सी, २४ जेठ । २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको एउटा जनमत सर्वेक्षणमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पछि पार्दै पूर्व...
शनिबार थपिए १७ जना संक्रमित, गण्डकी प्रदेशमा ७५ संक्रमित
पोखरा, २४ जेठ । गण्डकी प्रदेशमा शनिबार थप १७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद विन्दु...
चीनः धनी राज्य, गरिब जनता
चीन कस्तो देश हो ? धनी कि गरिब ? यो प्रश्नले धेरैलाई अलमलमा पारिदिन्छ । गरिब भनौं विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । धनी भनौं...